Aung Win Hein (Noble): 02/12/12
ကျောင်းမှာ story time ဆိုတဲ့ ပုံပြင်ပြောတဲ့အချိန်ရှိတယ်။
ပြီးတော့ စာကြည့်တိုက်မှာ ငှားဖို့စာအုပ်စာရင်းတွေကို ရေးပေးလိုက်တယ်။
မိဘတွေနဲ့အတူ စာကြည့်တိုက်မှာ စာအုပ်ငှားရတယ်။
အိမ်မှာ မိဘတွေက ငှားလာတဲ့စာအုပ်ကို ကလေးတွေကို ဖတ်ပြရတယ်။
ခဲတစ်လုံးနဲ့ငှက်နှစ်ကောင်၊သုံးကောင်ကို ထိအောင် ပစ်လိုက်တဲ့သဘောဖြစ်တယ်။
ကလေးတွေကို စာကြည့်တိုက်ကို သုံးတတ်အောင် သင်ပေးလိုက်တယ်။
မိဘတွေကို ကလေးတွေကို စာဖတ်ပေးအောင် တိုက်တွန်းလိုက်တယ်။
ကလေးတွေကိုလည်း အပြင်စာတွေကို ဖတ်အောင်တိုက်တွန်းလိုက်တယ်။
“Let’s go visiting…”
Kittens, piglets, ducklings… the farmyard is full of fun!
So let’s go visiting and see who’s ready to play.
Then once we’ve counted and recounted our colorful friends,
Let’s all snuggle together for an afternoon nap.
Let’s go visiting.
Two red calves are ready to play.
Three black kittens are ready to play.
Four pink piglets are ready to play.
Five green ducklings are ready to play.
Six yellow puppies are ready to play.
No more visiting.
Let’s curl up and sleep in the hay.
ကြောင်ကလေးတွေ၊ ဝက်ကလေးတွေ၊ ဘဲကလေးတွေ…..
လယ်ကွင်းထဲမှာ ပျော်စရာတွေနဲ့ အပြည့်။
အဲဒီနောက် တို့တွေ ရောင်စုံသူငယ်ချင်းတွေကို တစ်ကြိမ်ရေတွက်တယ်။
အားလုံးအတူတကွ နွေးနွေးထွေးထွေး ကွေးပြီးညနေခင်းတစ်ရေးတစ်မော အိပ်ကြရအောင်။
အညိုရောင် မြင်းပေါက်စလေးတစ်ကောင်ဟာ ကစားရဖို့အဆင်သင့် ဖြစ်နေတယ်။
အနီရောင် နွားကလေးနှစ်ကောင်ဟာ ကစားဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေတယ်။
အမည်းရောင် ကြောင်ကလေးသုံးကောင် ဟာ ကစားဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေတယ်။
ပန်းရောင် ဝက်ကလေး လေးကောင်ဟာ ကစားဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေတယ်။
အစိမ်းရောင် ဘဲကလေး ငါးကောင်ဟာ ကစားဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေတယ်။
အဝါရောင် ခွေးကလေး ခြောက်ကောင် ဟာ ကစားဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေတယ်။
ကောက်ရိုးပုံထဲမှာ ကွေးကွေးလေး အိပ်ကြရအောင်…။